Kutheni le nto kufuneka ukhathazeke ngamayeza okulwa nokutya? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ngaba uyazi ukuba okunye kokutya okuthandayo kunokuqulatha iidosi zentsholongwane? Injalo ke. Kuyothusa, kodwa kuyinyani.
Umbutho wezeMpilo weHlabathi kunye namaZiko oLawulo noKuthintela iZifo ayabuqonda ubukho beyeza lokutya e-United States, ngakumbi kwinyama ebomvu egqityiweyo.
Ngapha koko, le mibutho ikholelwa ekubeni ubukho bala machiza ekutyeni kunxulumene nokonyuka kosuleleko olungamelana nezifo. Ezi zifo ziya zisanda ngokwanda unyaka nonyaka.
Ngaphaya koko, ezi zifo ngoku zezona zinkulu- ukuba azikhoyona ngxaki inkulu yezempilo yoluntu ejongene nabantu kwihlabathi liphela. el mundo. Isilumkiso Oogqirha: Ngenxa yobukho bala machiza ekutyeni, nkqu nosulelo olulula, olufana nosulelo lomchamo kunye nenyumoniya, linokubulala. Ngapha koko, unyango kunzima.
1 Amayeza okubulala iintsholongwane kwimveliso yezilwanyana
2 Zingancitshiswa njani ezi ngozi?
3 Ukongeza, kukho ezinye izinto ezinokwenzeka:
Amayeza okubulala iintsholongwane kwimveliso yezilwanyana
Malunga ne-70% yee-antibiotics zithengiselwa ukusetyenziswa kwizilwanyana. Kuqhelekile, kwimveliso enkulu yezolimo, ukusebenzisa la machiza emanzini kunye nokondla izilwanyana zokuxhela.
Ukusebenzisa la machiza kwizilwanyana kubulala iintsholongwane ezininzi ezinobungozi, kodwa kuvumela nezinye iibacteria ukuba zifumane ukuxhathisa, zisinde, kwaye zande.
Ke, xa inyama yezi zilwanyana ifunwa ngumntu, ezi bhaktiriya zinganyangekiyo zingena emathunjini kwaye ziphazamise inkqubo ebisempilweni ngaphambili.
Zingancitshiswa njani ezi ngozi?
Ngokomgaqo, kufuneka kubekho iinguqu kwinkqubo yemveliso yokutya. Ngale ndlela, umngcipheko wokudala nokusasaza izifo ezinganyangekiyo ngamachiza uyancitshiswa.
Kutshanje, izazinzulu zicebise ukuba amafama alinganise izilwanyana kuphela xa kukho umfanekiso wesifo. Ukuba akukho sidingo sokwenene sonyango, ii-antibiotics azifanele zisetyenziswe.
Ngokwam, enye indlela kukwenza izigqibo ezingcono xa kusiziwa ekutyeni. Umzekelo, iinkampani ezinkulu zokutya okukhawulezayo zezi iimveliso zazo ziqukethe amanqanaba aphezulu e-antibiotics. Kungenxa yokuba inyama kwezi ndawo zokutyela yenziwa ngombane. Ngokufanelekileyo, thintela oku kutya.
Ukongeza, kukho ezinye izinto ezinokwenzeka:
Thenga kubavelisi abangasebenzisi zintsholongwane;
Inkxaso kunye nokutya kuphela kwiindawo zokutyela ezikhetha ezona ndlela zibalaseleyo;
Vakalisa inkxalabo yakho malunga noku. Emva kwayo yonke loo nto, le yingxaki yempilo yoluntu.